नयाँ शक्ति र फोरमको एकतामा किन लाग्यो 'ब्रेक'?
मनोज सत्याल काठमाडौं, साउन १०
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति नेपाल र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपालबीचको एकता प्रक्रियामा 'ब्रेक' लागेको छ।
दुबै पार्टीले वार्ता समिति गठन गरेर एकता प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए। पार्टीको विधान, चुनाव चिन्ह मसाल राख्ने सहमतिका साथ अगाडि बढेको एकता प्रक्रियामा नाम र नेतृत्वको विवादले ब्रेक लगाएको हो। एकता प्रक्रिया रोकिएपछि नयाँ शक्तिले पार्टीको कार्यकारी परिषद् बैठकमा फोरमसँगको एकताको विषयलाई अजेण्डा समेत बनाएको छैन।
स्थानीय तहको निर्वाचन एउटै चुनाव चिह्नमा तालमेलका साथ लडेका दुई पार्टीले पटक पटक राजनीतिक अजेण्डामा समेत संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। 'राष्ट्रिय मुद्दा सम्बोधन नगरी संविधान संशोधन अस्वीकार्य' रहेको भन्दै दुबै दलले पहिलोपटक २०७३ को मंसिरमा संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका थिए।
२०७२ को मंसिरमा नयाँ शक्ति अभियानको घोषणा गर्दा समेत भट्टराईले उपेन्द्र यादवलाई आफ्नो दाहिनेतर्फ बसालेका थिए। त्यतिबेलादेखि नै दुई पार्टीबीच एकताको चर्चा चलेको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचन अघि नै एकताको अन्तिम तयारी गरेका दलहरुले विधानमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीजस्ता महत्वपूर्ण अजेण्डामा सहमति जनाइसकेका थिए।
एकता अगाडि बढेपछि उपेन्द्र यादवले आफ्नो पार्टीलाई मधेसको मात्र पार्टीको रूपमा चित्रित नगर्न आग्रह गर्दै आएका थिए। भट्टराईले भने राष्ट्रियता मजबुत बनाउन मधेसी र पहाडी शक्ति एक ठाउँ आउनु पर्ने धारणा राखेका थिए। तर भट्टराई र यादव यतिबेला उत्तर र दक्षिण फर्किएका छन्।
कहाँ पुगेर रोकियो एकता?
एकताको वार्ता अन्तिम चरणमा पुगेपछि उपेन्द्र यादवले आफूलाई कार्यकारी अधिकारसहितको अध्यक्ष राख्नुपर्ने धारणा राखेपछि बाबुराम भट्टराई पक्षधर झस्किएको हो। नयाँ शक्ति स्रोतका अनुसार सिधा कुरा नगर्ने तर दोश्रो तहका नेतामार्फत् यादवले शक्तिमा आफूमा केन्द्रीत गर्ने प्रयास गरेपछि भट्टराई झस्किएका हुन्। यसअघि भट्टराई सम्मानजक पदमा मानेर एकताका लागि तयार भएपनि अधिकार नपाउने अवस्था उत्पन्न हुने देखेर भट्टराईले एक कदम पछाडि हटेका हुन्।
भट्टराईले औपचारिक रूपमा नेताहरुलाई भने 'एकतामा नेतृत्वको सम्मानजक अवस्था नआउँदा पार्टीमा नयाँ अजेण्डा स्थापना गर्ने प्रयास नै रोकिने' बताउँदै कदम पछाडि सारेका ब्रिफिङ गरेका छन्।
वार्ता समितिमा रहेका संघीय समाजवादी फोरम नेपालका नेता लालबाबु राउत नयाँ शक्तिको नेताहरुमा नाम पनि आफ्नै, चुनाव चिन्ह आफ्नै, नेतृत्व पनि आफ्नै होस् भन्ने चाहना देखिएको बताउँछन्। 'स्वभाविक हो। यी कुरा हरु आउँछन् तर अहिलेको सवाल भनेको नेतृत्वको र नामको नै हो', राउत भन्छन्, 'तर एकता टुङ्गिसकेको छैन।'
नयाँ शक्तिले वार्तामा सबै नाम छाडेर नयाँ नाम राखेर जान प्रस्ताव गरेको थियो। राजपा नेपालले सबै नाम छाडेजस्तै छाड्ने प्रस्ताव नयाँ शक्तिले गरेको हो। तर संघीय समाजवादी फोरमका उपेन्द्र यादवले 'फोरम' शब्द र अशोक राईले 'संघीय सजमावादी' शब्द छाड्न नसकिने बताएको छ। 'नाम भनेको पहिचानको कुरा हो', राउत भन्छन्, 'हामी भित्रै पनि नाम भनेको सबैको आइडिन्टेटी देखिनुपर्छ भन्ने कुरा छ।'
वार्ता प्रक्रियाम सामेल नयाँ शक्तिका केशव दाहालले आफूले विल्कुलै नयाँ नाम राखेर जान गरेको प्रस्ताव फोरमले अस्वीकार गरेको बताए।
'नयाँ समाजवादी पार्टी, नयाँ समाजवादी फोरम पार्टी नेपाल वा वैकल्पिक पार्टी नेपाल नाम भन्यौँ तर उनीहरुले संघीय समाजवादी फोरम चाहिन्छ नै भनुभयो', दाहालले भने, 'बरमझिया पेडा खालको नाम राखेर वैकल्पिक शक्ति बन्ने देखिएन।'
नेतृत्वको विषयमा समेत कुराकानी नमिलेका कारण एकता वार्ता निष्प्रभावी बनेको हो। बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिले सुरुवातमा पार्टीको संयोजक भट्टराई रहने उपेन्द्र यादव र अशोक राईलाई सह संयोजक राखेर अगाडि बढ्न प्रस्ताव गरेको थियो। तर फोरमले प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेको थियो।
उपेन्द्र यादवलाई अध्यक्ष राख्नुपर्ने फोरमले अडान प्रस्तुत गरेको थियो। भट्टराई पक्ष यादवलाई अध्यक्ष मान्न तयार भएपनि संयोजकमा भट्टराईलाई राख्ने नयाँ प्रस्तावका साथ अगाडि बढयो। तर कार्यविभाजनमा पुगेपछि यादव पक्षले भट्टराईलाई 'सेरेमोनियल' मात्र बनाउन खोजेको देखेपछि नयाँ शक्ति पछाडि हटेको हो।
'सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार अध्यक्षमा र बाबुरामलाई सेरेमोनियल संयोजक बनाएर नयाँ पार्टी बन्दैन', दाहालले भने, 'अशोक राईको पार्टीसँग जस्तो डिल गरेर एकता गर्न खोज्नुभयो।'
राप्रपाको जस्तो राष्ट्रिय अध्यक्ष र कार्यकारी अध्यक्षको मोडल बनाएर एकता गर्ने विषयमा समेत कुराकानी भएपनि नमिलेको दाहालले बताए। 'अधिकार के के हुने भन्नेमा कुराकानी मिलेन', उनले स्पष्ट भने, 'हामी हात मिलाएर निस्कियौँ।'
नयाँ शक्तिमा रहेका रामचन्द्र झा, दवेन्द्र पौडेल लगायतका नेताहरुको पोजिसन अनि संघीय समाजवादीमा रहेका राजेन्द्र श्रेष्ठ लगायतको पोजिसनका विषयमा समेत मतान्तर भएको स्रोतको दाबी छ।
भट्टराई पक्षधरले एउटै चुनाव चिन्ह प्रयोग र राजनीतिक मत समानान्तर भएपछि एकतामा बढी जोड गरेको थियो। तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा नयाँ शक्ति पहाडी क्षेत्रमा कमजोर भएपछि उपेन्द्र यादवको पार्टीले एकतामा हैसियत बढी दाबी गरेको थियो।
उपेन्द्र यादवको पार्टीले एकताको नाममा पार्टी नै समाप्त हुने देखेपछि भट्टराई पक्षधर पछाडि हटेको हो। 'सबै थोक पुरानो पार्टीको हुने अनि अब नयाँ राजनीतिक शक्ति कसरी स्थापना गर्ने? कार्यकर्ता उही हुने, हामीले भने जस्तो शक्तिशाली कार्यकर्ता नहुने भएपछि मिलेन', दाहालले भने, 'अजेण्डा मिलेर मात्र भएन कार्यावन्वयन हुने अवस्था पनि मिल्नुपर्‍यो नि।'
नयाँ शक्तिले राजनीतिक तालमेल र देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख पक्षधरसँग अब गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्ने जनाएको छ। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीले भने एकता प्रक्रिया टुङ्गिसकेको मानेको छैन।
दुई दलबीच दुरी बढेपछि नयाँ शक्ति प्रदेश नं २ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा मसाल चिन्ह समेत छाड्ने मनस्थितिमा पुगेको छ। 'परिणाम सबैथोक होइन। यो परिस्थितिमा निर्वाचनप्रतिको निष्ठा ठूलो कुरा हो', दाहालले भने, 'चिन्हमा मिलेन भने अन्य उपाय छन्।'
दुबै पार्टीले एकताको विषय अन्तिम चरणमा पुगेपछि निर्णय लिन बैठक डाकेका थिए। तर एकतामा ब्रेकसँगै दलहरुको बैठक अब निर्वाचनको समीक्षामा केन्द्रीत हुने भएको छ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन १०, २०७४, ०१:११:११
चिकित्सक संघद्वारा भोलि देशभरका आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने घोषणा